शिल्पाका बारेमा यस्तो भन्दै आए छवि, अहिले पनि रेखाकै घरमा बसेको छु (भिडियो हे’र्नुहोस)
Homeसमाचारशिल्पाका बारेमा यस्तो भन्दै आए छवि, अहिले पनि रेखाकै घरमा बसेको छु (भिडियो हे’र्नुहोस)
April 18, 2021 admin समाचार 5458
नायीका शिल्पा पोखरलेका बारेमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्र’स्तोता प्रकाश सुवेदी सिलसिलेवार रुपमा कार्यक्रम बनाउने काममा लागेका छन् । कार्यक्रम रजतपटमा उनका बारेमा पुरै कार्यक्रम नै तया’र पारेका उनले अर्को आफ्नो कार्यक्रम ग्ल्यामर गफमा पनि शिल्पालाई नै कार्यक्रमको विषय बस्तु ब’नाएका छन् ।
शिल्पाले आफ्नो चरि’त्रलाई लिएर प्रकाशले कार्यक्रम बनाएको र अदालतमा विचा’राधिन विषयलाई अनावश्यक रुपमा विवा’दित बनाएको भन्दै शिल्पाका विभिन्न निकायमा प्रकाशका वि’रुद्ध उजु’री पनि दिएकी छन् ।
शिल्पाले आफुलाई अनावश्यक रुपमा अरुसंग नाम जोडेर वे इ’ ज्ज त गर्ने कोशिष गरेको भन्दै शिल्पा प्रहरी कार्यालय, माइती नेपाल लगायत विभिन्न ठाउँमा उ’जुरी दिन पुगेकी थिइन् ।
शिल्पाका बारेमा रजतपटमा का’र्यक्रम बनाएपछि र विभिन्न रिपोर्ट बनाए पछि शिल्पाले त्यसको प्र’तिकृया पनि दिएकी हुन् । सम्बन्ध विच्छे’द, अंशका वारेमा अदालतमा मु’ द्दा विचाराधिन रहँदा सम्म चुप’चाप लागेका शिल्पाका पति भने अहिले पहिलो पटक मिडियामा आएका छन् । त्यो पनि प्रकाश सु’वेदीकै कार्यक्रममा ।
उनले प्रकाश सुवेदीकै कार्यक्रममा अन्तरवार्ता दिन आइपु’गेका हुन् । उनले शिल्पाले आफ्नो सबै सम्प’त्ती शिल्पाले रोक्का गरेको बताएको बताएका छन् । छविले आएर मिलापत्र गरौं भन्दा म तिम्रो अनुहार हेर्न नचा’हने भएकाले नजिक पर्दिन भनेको छविको भनाई छ ।
शिल्पालाई आफ्नो घर परिवारमा लगेको भएपनि छवि भने ससु’राली नग’एको बताएका छन् । यतिका वर्षसम्म श्रीमतीकै हैसि’यतमा बसेको भएपनि शिल्पाले आफ्नो माइतीमा नलै’जानुमा उनले योजनाका कारण आफुसंग विवाह गरेको हुनसक्ने आ’शंका गरेको बताएका छन् । इताजाखबरबाट
December 3, 2020 admin समाचार 9167
May 26, 2021 admin समाचार 6021
February 2, 2021 admin समाचार 6624
नेपाली बजा’रमा आज सुनको मूल्य यथावत छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आज पनि छा’पावाल सुन प्रतितोला ९२ हजार ६०० रूपैयाँ काय’म भएको छ । तेजाबी सुनको मूल्य आज पनि तोला_को ९२ हजार १०० कायम
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (241936)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229837)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229470)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (227839)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226637)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226214)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194238)